Tale mpanatanteraky ny Ortana, Razafinavalona Harimisa : «mampiavaka an’Analamanga ny tantara sy ireo vohitra masina…. » | NewsMada
Tale mpanatanteraky ny Ortana, Razafinavalona Harimisa : «mampiavaka an’Analamanga ny tantara sy ireo vohitra masina…. »
Nivahiny tao amin’ny onjampeo Alliance 92 amin’ny alalan’ny fandaharana « Ambarao » ny tale mpanatanteraky ny Ofisim-paritry ny fizahantany, Analamanga (Ortana), Razafinavalona Harimisa, omaly. Nasongadiny tamin’izany ny tontolon’ny fizahantany sy ny tombony ao anatin’izany. Ampahany amin’ny resadresaka…
« Dimy taona izahay niezaka nampahafantatra an’ Analamanga amin’ny alalan’ny tsidi-bohitra. Mampiavaka an’Analamanga ny tantara. Anisan’izany ireo vohitra masina miisa 12 manodidina an’Antananarivo. Amin’ny maha Renivohitra azy koa, hita eto avokoa ny kolontsain’ny faritra 22… Harena sy tolotra eto Analamanga amin’ny fizahantany izany », hoy izy. Nanteriny fa misy ny tantara fa eo koa ireo avy amin’ny lafivalon’ny Nosy monina eto ary tolotra ampahafantarana an’Analamanga koa izany. « Hita amin’izany ireo hetsika samihafa ka ahitana ireo mpanakanto avy amin’ny faritra manao fampisehoana eto. Samy harenantsika avokoa izany », hoy ihany izy. Tsy izany ihany anefa fa eo koa ireo vahiny monina sy mandalo eto Analamanga, manana ny kolontsainy koa izy ireny. Noraisiny ho ohatra ny sakafo sinoa, indianina… « Anisan’ny harenantsika eto sady tolotra amin’ny fizahantany mampivaka an’Analamanga daholo izany », hoy ity tale ity.
Anjarantsika ny maneho ny harenantsika…
Notsiahiviny fa anisan’ny fampahafantarana ny fizahantany ireo hetsika tohanan’ny Ortana. Noraisiny ho ohatra ny hetsika momba ny jazz na koa ireo mpanakanto manao fampisehoana na hetsika ara-kolontsaina hafa. Eo amin’ny iraisam-pirenena kosa, nambarany fa efa maro ireo mahalala an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny natiora sy ny zava-boahary ka anisan’ny manintona azy ireo ho avy eto zany. « Anjarantsika ny maneho ny harenantsika amin’izy ireo rehefa tonga eto ka hampahafantarana ireo vohitra masina ireo. Ny tantaran’ny mpanjaka sy ireo vakoka mampiavaka antsika… » hoy izy. Tsy mitombina ny fomba fijery fa fandalovan’ny mpizahantany Analamanga. Nanteriny fa efa mizahatany rehefa matory 24 ora eto ireo vahiny mpizahantany. “Misy koa ireo harena na zavatra hafa eto Analamanga ihany no ahitana azy raha mitaha amin’ny faritra hafa. Eo koa ny asa tanana…”, hoy ihany izy.
Miteraka asa sy fampandrosoana
Entanina koa anefa ireo tanora mba hahalala fa eny an-dalana rehetra eny ny harenantsika eo amin’ny tontolon’ny fizahantany ho an’ny eto Analamanga. Anisan’izany ny tafo tanimanga, ny tsangambato, ny firafitry ny tanàna sy ny trano, ny tohatohabato, koba sy ny toeram-pisakafoana madinika… “Na sahirana aza isika, tokony hijery lavitra amin’ny fizahantany… Sehatra tokony hampandroso antsika io nefa tsy mbola manintona ny tanora sasany satria tsy fantany… Zava-baovao rahateo ny fizahantany ary tsy nobeazina tamin’izany isika. Na izany aza anefa, efa manomboka miaina izany isika. Ohatra ireny any Mahajanga ireny rehefa volana aogositra. Tonga any avokoa ny avy aty Analamanga ary tsy mahita toerana ipetrahana raha tsy manao famandrihana. Ezahina ny handalantsika izany kolontsaina mizaha tany. Miteraka famoronana asa izany…”, hoy izy. Nentaniny ny rehetra hampahafantatra ny faritra misy azy avy mba hahatongavan’ny mpizahatany ka hiteraka fampandrosoana izany.